Iyi ndiyo mhedzisiro Zoomerang!)
Izvo zvakati, iwo matanho anopa chimwe chidimbu cheruzivo ... kune mikana yakawanda yekushambadzira matekinoroji emagetsi ekuvandudza maturusi ekuchengetedza nguva ayo anoita edu maitiro Aya mavhiki maviri ekupedzisira ndakapedza nguva yakawandisa ndichibvisa data kubva analytics uye kugadzira magadzirirwo etsika nemadhibhodhi kumutengi kuti ape zvekuisa pane ese edu ekutsvaga injini yekugadzirisa basa ratakaita. Makumi ezviuru emazwi akakosha aidiwa kurongwa, kuiswa mumapoka uye kusefa kuti vaone kana kuedza kwedu kuri kubhadhara… risiri basa rakareruka kumunhu, asi zvinokwanisika kune kambani yekusimudzira.
Izvo zvinoitawo kuti ndinetseke kana vashambadziri vari kutora nguva yekushandisa otomatiki mhinduro kana ivo vanongo enda nzira yemanyorerwo. Ini handikwanise kumira ndichiita zvakafanana maitiro kaviri mumutsara saka ndinogara ndichitsvaga nzira iri nyore. Pamwe ndiwo musoro wenyaya wekuvhota kuri kuuya!
Sarudzo yevhiki ino yakati rebei. Tiri kuda kuziva nezvemhando dzemagariro enhau mauri kuendesa kukambani yako: